Wasaaradda amniga “Waxaan cafis u sameyn doonaa siyaasiinta Mucaaradka ah ee Dowladda ka soo horjeeda”. | Marqaan News Agency
Published on January 11, 2018 by dahir · 1 Comment
C/casiis Cali ibraahim ” Xildhibaan” oo maanta shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay cafis u sameyn doonto siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah Dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Afayeenka Wasaaradda Amniga in mas’uuliyiinta amniga ee Hay’adaha Dowladda isku afgartayn in la siiyo cafis siyaasiin mucaarad ah oo Dowladda ka soo horjeeda,hadii ay mar dambe u laabtaan falal la xariira qaran Dumis-nimo ay Dowladda talaabo ka qaadi doonto.
Waxaa jira Siyaasiyiin isugu jiray kuwo xilka iyo kuwo horay u soo qabtay oo mucaarad ku ah Dowladda uu hogaamiyo Maxamed C/llaahi Farmaajo,kuwaasoo dhaliilsan sida hogaanka dalka ay wax u wadaan.
KKK kuwaas ayaan sowladnimo laga sugayaa iaka daa wax kala’e iyagii ayaan is igaayn siraato ayuu yariisoow lahaa arinka mucaaradka maxkamad ayaa ka socota hadane waa kaasaa kkkkkk maxaad cafinaaydaan ma nin markii hore aad qalad ku weerarteen oo hadane aad qalad ku xirteen oo qalad aad ku sii daaydeen oo aad qalad ku haaysataan ayaa hadane qalad ku cafinaaydaan,war meesha boorsooyinkiina ka soo urursada,kilaabyahay,